China High Performance U Profile Girazi / U Channel Girazi reDhifi fekitori uye Vagadziri | Yongyu
U mbiri girazi kana inonzi U chiteshi girazi rinobva kuAustria. Iyo zvakare inogadzirwa anopfuura makore makumi matatu neshanu kuGermany. Seimwe yezvinhu zvakajairika zvinoshandiswa muzvirongwa zvekuvaka zvakakura, U mbiri girazi inoiswa zvakanyanya muEurope neAmerica. Iko kunyorera kweU profile girazi muChina kwakanyorwa kubva kuma1990. Uye ikozvino nzvimbo zhinji muChina dzinoishandisa kune yayo-yepasi-based dhizaini maitiro.
U mbiri girazi imwe yemhando yekukanda magirazi. Iko kufambira mberi kwekuumba mune yeyunivhesiti-inodzora svutugadzikevira inoita kuti igone kuchengeta yakanakisa mhando uye chaiyo. Simba rayo rakakura remuchina inoita kuti igone kumisikidzwa pazvivakwa zvakakwira uye zvimwe zvivakwa zvinoda mwenje wakanaka. Uye izvi zvinogona kuchengetedza zvivakwa kubva pakawedzerwa vertical uye yakatwasuka nekumanikidzwa. U mbiri girazi inoratidzwa nekunaka kwayo mwenje, kupisa kupisa uye kuchengetedza, kurira kwakanaka uye kuchengetedza ruzha- ndiyo imwe yemhando nyowani nharaunda-inoshamwaridzika uye ehupfumi magirazi.
Kujeka kwemasikati: Inokanganisa mwenje & inoderedza glare
Thermal Performance: U-Kukosha huwandu = 0.49 kusvika 0.19
Great Spans: Girazi madziro eisina muganho upamhi & yakakwirira kusvika gumi nemamita.
Elegance: Girazi-kune-girazi makona & snakeine curves
Seamless: Hapana chitsigiro chesimbi chinotsigira chinodiwa
Hwakarema: 7mm gobvu U mbiri girazi iri nyore kubata
Yakasarudzika Sarudzo: Mutauri kuisa
Anochinjika: Kusungira musono munzvimbo dzemaonero, shandura kukwidziridzwa & ndege
U prfole girazi P23 / 60/7 P26 / 60/7 P33 / 60/7
Kubatana Kwechiso (w) mm 232mm 262mm 331mm
Kubatana kweWhite (w) inches 9-1 / 8 ″ 10-5 / 16 ″ 13-1 / 32 ″
Flange kureba (h) mm 60mm 60mm 60mm
Flange kureba (h) inches 2-3 / 8 ″ 2-3 / 8 ″ 2-3 / 8 ″
Girazi rakadzika (t) mm 7mm 7mm 7mm
Girazi yakakora app. inches .28 ″ .28 ″ .28 ″
Upamhi hwehurefu （L) mm 7000 mm 7000 mm 7000 mm
Maximum Kureba （L) inches 276 ″ 276 ″ 276 ″
Kurera (single layer) KG / sq.m 25.43 24.5 23.40
Kurera (single layer) lbs / sq ft. 5.21 5.02 4.8
Magirazi eGirazi *
* Ongorora: Humwe hukuru uye magadzirirwo anogona kunge ari mashoma kugadzirwa uye pasi penguva refu inotungamira. Kune makuru mapurojekiti, isu tichafarisisa kukurukura tsika maficha uye saizi.
Kupisa & kupisa soak kuyedza
Isu takatanga iyo yekuedza nzira yeU mbiri girazi kusvika ku20 ′ kureba uye takagadzira tsika yekuisa ovheni chete yekuseresa matatu-emhando yeU girazi yegirazi. Mashini avo, mashandiro avo, uye ruzivo ruzivo rwekuita zvishoma pagirazi zvinowirirana
Yakaomeswa LABER U mbiri girazi isine yakavharwa girazi girazi rakapinda yechipiri kupisa kurapwa muivheni yekupisa kuti isimbise girazi uye kukwidza kumanikidza kune 10,000 psi kana kupfuura. Yakaedzwa U mbiri girazi yakasimba katatu kusvika mana yegirazi uye inozivikanwa neiyo nzira yekuputsa - zvidiki zvidiki, zvisingakuvadzi zvipenga. Ichi chiitiko, chinodaidzwa kuti "dicing," chakanyanya kuderedza mukana wekukuvadza kwevanhu sezvo pasina magiragi akapinza kana akakura, shadhi akapinza.
Mhepo Mitoro uye Deflection
Akagadziridzwa Girazi Yakaomeswa Girazi
Designwind mutoro lb / ft² Designwindkumhanyisa mph (fungidziro) Max Span @ Wind Load Mid-Point Deflection @ Max span Max Span @ Wind Load Mid-Point Deflection @ Max span
30 108 8.5 ′ 0.00 ″ 16.0 ′ 3.02 ″
Dhizaina mitoro yemhepo lb / ft² Dhizaina mhepo yekumhanyisa mph (yakatarisana) Max Span @ Wind Load Mid-Point Deflection @ Max span Max Span @ Wind Load Mid-Point Deflection @ Max span
30 108 12.0 ′ 0.00 ″ 22.7 ′ 6.32 ″
Yepfuura: Yakadzika Iron U Profa Girazi / U Channel Girazi Simba reGeneral System
Inotevera: Jumbo / Oversized Dziviriro Yegirazi